किन हटाइए विकास लिम्बु भ्वाइस अफ नेपालको ‘वल्र्ड टुर’बाट ? « हातमा खबर-जहाँ तपाइँ, त्यहीं खबर
किन हटाइए विकास लिम्बु भ्वाइस अफ नेपालको ‘वल्र्ड टुर’बाट ?
प्रकाशित मिति : २०७६, २ माघ बिहीबार ०८:४८
काठमाडौं । भ्वाइस अफ नेपाल सिजन टु को टप फोरमा पर्न सफल विकास लिम्बु वल्र्ड टुरमा जान नपाउने भएका छन् । वल्र्ड टुरमा जान छनौट भएका लिम्बुलाई भ्वाइस अफ नेपालले एकाएक वल्र्ड टुरमा जाने टीमबाट हटाएको हो ।
यूट्यूव च्यानल मेरोअनलाईट टिभीसँगको कुराकानीमा लिम्बुले आयोजकको माग नभएकाले यस पटक लैजान नपाएको भ्वाइस अफ नेपालले बताएको जानकारी दिएका छन् । तर लिम्बु यो कुरा मान्न तयार छैनन् । उनी भन्छन्,‘मेरा फ्यानले कति देशबाट फोन गर्नुभएको छ, माग नभएको भन्ने कुरा सही होइन । के गर्नु हामीले उहाँहरुसँग सम्झौता गरेका छौं, एकवर्षसम्म हामीले उहाँहरुको अनुमति विना केही गर्न सक्दैनौं । उहाँहरुले नाम त दिनुभएको छ तर त्यहाँभित्र केही गलत चाहिं छ ।‘
आफू टीममा नपरेको कुरा कार्यक्रम उत्पादक सुशील नेपाललाई सोध्दा तिमी पछिल्लो टुरमा जाने जवाफ दिएको उनले बताएका छन् । उनले भने ‘यो कार्यक्रम त आगामी मार्चमा छ अर्कोमा कहिले जाने ? त्यसबेलासम्म त हाम्रो सम्झौता सकिहाल्छ ।’ वल्र्ड टुरमा जाने टीमको पोष्टरमा समेत लिम्बुको फोटो राखिएको थियो । आफूलाई दाइले अमेरिकाबाट भनेपछि मात्र आफू हटाइएको थाहा पाएको गुनासो उनले गरेका छन् ।
भ्वाइस अफ नेपाललाई उनको आग्रह छ, ‘काठमाडौंमा बस्नु परेको छ कति महंगी छ, तर म पहिला काम गर्थें गजल गाउँथे तर अब काम पनि छैन, अनि टुरमा पनि जान नपाएपछि कसरी बाँच्ने त ? कि गाँसबासको व्यवस्था गर्नुपर्यो कि यस्ता कार्यक्रमबाट हटाउनु भएन ।’